Ipapashwe ngu ulawulo20-11-13
Lo ngumzi-mveliso wethu, ubekwe kwisiThili saseHuian Chengnan, eQuanzhou, isixeko esiselunxwemeni eFujian, China, Esonwabela udumo lwe "Isixeko seengxowa kunye namatyala". Iingxowa zeHongsheng yay ...
Ingaba uyayithanda ?786
Ipapashwe ngu ulawulo20-11-12
Esi sisakhiwo sethu semveliso, sithatha malunga ne-30,000 yeemitha zesikwere. Imigangatho yethu yocweyo ixhotyiswe kakuhle ngabasebenzi abangaphezulu kwama-200, imigca yemveliso esi-8, ...
Ingaba uyayithanda ?723
Ipapashwe ngu ulawulo20-11-11
Eli lisebe lethu le-IQC elinomatshini opheleleyo wovavanyo. I-IQC (iintsuku eziyi-1-2) 1. Uvavanyo lokukhawuleza kombala, ukuvavanywa kwamalaphu, isiphatho sebhegi kunye novavanyo lwejack strap test, itrley test. 2. QC ...
Ingaba uyayithanda ?821
Ipapashwe ngu ulawulo20-11-10
Igumbi lethu lokubonisa lithatha malunga ne-2,000 yeemitha zesikwere. Iminyaka engama-27 yamava kule nkalo, ngoku thina kakhulu ngobungcali ekuyileni, ekuphuhliseni nasekuveliseni iingxowa ezahlukeneyo ...
Ingaba uyayithanda ?804